Fav Trans - LuciousKim - Wattpad
Tu Fei Gong Lue
52.3K 11.2K 22
Author - Yu Xiao Lan Shan Pairing - Zhao Yue x Wen Liu Nian - Shang YunZe x Mu QingShan
နောကျတကွိမျ သသှေားပွနျတဲ့ တပညျ့ကြျော(my discipline die yet again)
884K 116K 144
ကငျြ့ကွံခွငျး လောကမှာ အားလုံးက လေးစား အားကြ ကွောကျရတဲ့ ဆရာသခငျ' ယုယနျ' တဈယောကျ နှဈပေါငျး သောငျးခြီကွာမှ တပညျ့ တဈယောကျ လကျခံလိုကျပါတယျ။စိတျနှဈကိုယျနှဈ သငျပေးတာကွောငျ့ သူ့တပညျ့လညျး ကငျြ့ကွံရငျး ကြျောကွားလာခါနီးမှာပဲ သဆေုံးသှားပါတယျ။လကျမလြော့တမျး နောကျထပျတပညျ့ တဈယောကျ မှေးပွနျတယျ။ထပျသငျပွနျတယျ။တကယျ့ကို လူလားမွောကျ...
2M 260K 200
I DO NOT OWN THE STORY. FULL CREDIT TO THE ORIGINAL AUTHOR. 《Zawgyi》ချင်းစုယွဲ့ဟာ အရံဗီလိန်ဇာတ်ကောင်အဖြစ် ဝတ္ထုထဲသို့ ကူးပြောင်းရောက်ရှိလာတာကို သိသိချင်းမှာပဲ သူမရဲ့ သေဆုံးရမယ့် ကံကြမ္မာဆိုးနှင့် မကြုံတွေ့စေဖို့အတွက် အမျိုးသားဇာတ်လိုက်နှင့် အမျိုးသမီး ဇာတ်လိုက်တို့ကို ဂရုတစိုက် ရှောင်ရှားတော့လေ၏။ ဒါပေမယ့် ချင်းစုယွဲ့ရဲ့...
② Young Master Mo, Are You Done Kissing？
581K 106K 177
【UNEDITED】「COMPLETE」 Myanmar Translation of ❛ Young Master Mo, Are You Done Kissing？❜ မော့ကငျြးရှနျး VS ကြိနှမျ Author：青青谁笑 《Qingqing Who Laughs》 Native Title：暖风不及你情深『墨景深VS季暖』
ရှောငျဝမျလေးတို့ရဲ့အခဈြပုံပွငျ [ မွနျမာဘာသာပွနျ ]
805K 132K 74
Status: Completed in Myanmar Translation Author: Little Ice Cube(冰块儿) Status: 58Chapter + 11 extra (completed) Type: webnovel Associated name: Shh! My Dear Alpha My update will be in weekdays! I cherish this novel so much. So, I want to translate this into Myanmar Language. All right credit go to the orginal author...
ရခေဲတုံးအကိုကွီးကို ဆှဲဆောငျသော ဝံပုလှညေီငယျလေး
1.8M 356K 200
Myanmar Translator _ May King Start date _ August 12, 2020 End date _ October 25, 2021 (completed)
277K 45.8K 33
Title : 谣言止于恋爱 Love Stops Rumours Author : 萧辰 Xiao Chen Chapters : 30 Category : BL, Mature, Comedy, Campus Status: complete English Translator: AlexPT (Procrastination Translations) *permission granted from english translator* English translation link is here: https:...
862K 119K 107
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်၏ သန္ဓသေားနှင့်အတူနိုးထခြင်း Title : I woke up pregnant withaJiangshi's child Original Author: Lu Guitu Genre: supernatural / historical Eng Translator: momochingu@ Novel status: completed 100+extras Translation status: on going(engtrans also on going)
1.6M 241K 83
MM Translation of Rebirth ofaMovie Star ပိုင်လန်က ဒီဘဝမှာ အတက်အကျအနိမ့်အမြင့်တွေနဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ ရုပ်ရှင်မင်းသားတစ်ဦး။ ဒါပေမယ့် ပုံအောပြီး ချစ်ခဲ့ရတဲ့ အတူနေချစ်သူကလည်း ခြေစုံကန်ပြီး ထွက်သွားပြီ။ နှစ်ပေါင်းများစွာ နွားလိုရုန်းပြီး ထောက်ပံ့ပေးခဲ့ရတဲ့ မိသားစုတွေကလည်း သူ့ကို လှည့်မကြည့်ကြတော့ဘူး။ ပရိသတ်တွေဆီကလည်...
Rebirth of Chen An【Zaw + uni】
1M 132K 124
လကျနကျရာဇာခနျြကနျြးအနျးဟာသစ်စာဖောကျလကျထဲကိုယျ့ကိုယျကိုယျအဆုံးစီရငျပွီး အခွားခန်ဓာတဈခုမှာပွနျနိုးထလာခဲ့တယျ။ သဘာဝဖွဈရပျလှနျကိစ်စအတှကျ ခနျြအနျးဟာအထူးတလညျးအံ့ဩမနပေါဘူး။ မသခေငျကမွခှေေးအိုလို့နာမညျကွီးတဲ့သူဟာ ခန်ဓာပွောငျးသှားလဲ ဘဝကိုဘယျလိုအနိုငျယူရမယျဆိုတာ သငျပွပါဦးမယျ။ Author -WanMeiZhiShang
263K 43.8K 61
အသက်၁၅နှစ်မှာ ဟော်ကျင့်ကonline gameတစ်ခုကနေ "ခင်ပွန်း"ယောင်္ကျားတစ်ယောက် ရခဲ့တယ်။ သူတို့ရဲ့အချစ်က မြတ်နိုးတွယ်တာမှုတွေ၊ ချိုမြိန်မှုတွေနဲ့ ပြည့်နေခဲ့တယ်..။ ဒါပေမယ့် သူ့ပညာရေးကြောင့် မိဘတွေက internetကို ဖျက်ပစ်လိုက်တယ်..။ သူ့ခမျာ နှုတ်ဆက်စကားတောင် ပြောခွင့်မရလိုက်ဘဲ gameထဲကနေ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရတယ်..။ ၈နှစ်လောက်ကြာတော့ အတိတ်...
အစဈမကိုကြျောလှနျ၍ ရကျပေါငျး (၃၀) [မွနျမာဘာသာပွနျ] (Completed)
731K 87.3K 64
F ယူနီဗာစီတီ ရဲ့ စွဲ​ဆောင်​မှု အရှိဆုံး ​ယောကျာ်း နှစ်​​ယောက်​.... ၀မ်​ကွမ်းနင်​ နဲ့ ကျန်းလင်​ရိ ထိုလူငယ်​ နှစ်​ဦးမှာ မည်​သည့်​ကိစ္စတွင်​မဆို သူနိုင်​ကိုယ်​နိုင်​ အပြိုင်​ကျဲကြမည်​ဟု ​ကြွေး​ကြော်​ကာ အမြဲပင်​ ယှဉ်​ပြိုင်​​နေ​သော လူ နှစ်​​ယောက်​ သူတို့ နှစ်​ဦး လိုက်​​ပိုးပန်းေ​သာ ​ကောင်​မ​လေးမှာလည်း တစ်​ဦးတည်းဖြစ...
Thousand Autumns (​ဆောင်းဦးအ​သ​င်္ချေ)(MM Translation)
296K 60.6K 123
I don't own this story.It's justatranslation of Chinese Novel,named 'Thousand Autumns' in Burmese language. And every photos in this work are not mine.I picked them from pinterest.Credits to original owners. Chinese Author-Meng Xi Shi (梦溪石) Eng Translator-MoMoePam Chapter-128+13extra...
Love you 59 seconds (Myanmar translation)
155K 31.7K 72
Original Author- Yun Guo Shi Fei ⟨⟨云过是非⟩⟩ English translater - Midori & Neko ဝူဟန်ယင်းတစ်ယောက် မသိရသည်မှာဘာကြောင့်လူအုပ်ကြီးတစ်အုပ်သူ့နောက်လိုက်လာပြီး "မရီး" လို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းရင်း? ရှချန်ဘယ်အချိန်တည်းကနည်းနည်း‌ကြောင်‌တောင်‌တောင်နဲ့နာခံတတ်တဲ့ ဝူဒေါင်လေးကိုသဘောကျခဲ့မိမှန်းမသိ ... နောက်ကလိုက်ခံရတာရော မရီးလို့ခေါ်ခံရတာရော...
WZXZ (ကြောငျးသားဆိုး အယောငျဆောငျ)
293K 61.8K 85
Author - 木瓜黄 (Mu Gua Huang). He Zhao x Xie Yu 贺朝 x 谢俞 Original title - 伪装学渣 / Wei Zhuang Xue Zha (ကျောင်းသားဆိုး အယောင်ဆောင်) / (ကြောငျးသားဆိုး အယောငျဆောငျ) Eng title - Fake Bad Students / Slackers ♦️|Myanmar Translation| Source - jjwxc
Antidote 《解药》 || Myanmar Translation
324K 72.8K 106
Myanmar Translation of Antidote 《解药》 Author: 巫哲 [Wu Zhe] Status on jjwxc - Completed [99 Chapters +3Extra chapters] Genre - Romance, Shounen Ai, Slice of Life, BL Disclaimer : I do not own this story and this is justaFan Translation. All credits go to Original Publisher (jjwxc) and author Wu Zhe. Peace (V) //𝗱�...